July Dream: City of water
What you think about the debris of Ayuddhaya is possible. Neverthless, I don't know how thai people think about it. It might be different. Isn't it?
ထိုင်းတွေကတော့ မြို့ပျက်ကြီးကို ဘယ်သူလုပ်လို့ အခုလိုမျိုး ပျက်ဆီးသွားတယ် ဆိုတာမျိုး မပြောပဲ... ရန်သူတွေ တိုက်လို့ အဲဒီမြို့ ကျသွားတယ်။ အဲဒါနဲ့ လက်ရှိမြို့ကို စွန့်ခွါပြီး ဘန်ကောက်ဘက်မှာ မြို့တော် ပြောင်းဆောက် ရတယ်ပဲ အဓိက ထားပြောတယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။ ဆိုင်းဘုတ်တွေမှာ ဗမာလို့ မရေးထားပဲ ရန်သူတွေလို့ သုံးနှုန်းတာလေးကို သတိထားမိပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ ဗမာတွေ ဝင်တိုက်တာနဲ့ မြို့ထဲက ဘုရားတွေ အဆောက်အဦးတွေ အခုလိုမျိုး အတုံးအရုန်း ပျက်ဆီးနေမယ်လို့ မမြင်မိပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ တမြို့လုံး နီးပါးက ရှေးဟောင်း အဆောက်အဦးတွေ စေတီဘုရားတွေ အားလုံး ပျက်ဆီးနေလို့ပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဗမာတွေ စစ်အောင်ပြီးမှ တမြို့လုံးက ဘုရားတွေကို တကူးတက စိတ်ပါလက်ပါ ဖျက်ဆီးဖို့ ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ချေ အတော်လေးကို နည်းပါတယ်။
မြို့ပျက်ထဲက ဘုရားဆင်းတုတွေ ခေါင်းတော် မရှိတော့တာကလည်း ရှေးဟောင်းပစ္စည်း ခိုးတဲ့ ဂိုဏ်းတွေက ဘုရားခေါင်းတော်ပဲ ဖြုတ်ခိုး သွားတာကြောင့် အခုလို ခေါင်းတော် မရှိတဲ့ ဆင်းတုတွေ တွေ့နေရတာလို့ ရှင်းပြကြပါတယ်။
သမိုင်းဆိုတာ တုတ်ထမ်း ပြောရတာ ဆိုတော့လည်း... =)
ကံ ကံ၏အကျိုးကို တော့ဘယ်သူမှ ရှောင်လွဲလို့ မရပါဘူး...